ओली सरकारले फेरी गर्‍यो जनता रुवाउने निर्णय — Sanchar Kendra
ओली सरकारले फेरी गर्‍यो जनता रुवाउने निर्णय
काठमाडौं । खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाउ बढेर जनता हैरान भएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार करको दायरा बढाए लगत्तै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर थप एक रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। निगमले राति १० बजे मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमले पेट्रोल,डिजल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो।
निगमका उपनिर्देशक विनितमणि उपाध्यायकाअनुसार बुधबार राति देखि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १११ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलको ९८ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य कायम भएको छ । सरकारको यो निर्णयले जनता निराश भएका छन् ।
यसैबीच सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थविज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय लिएका हुन् ।
यता पूर्वअर्थमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बुधबार सार्वजनिक भएको बजेट गुणात्मक परिवर्तनका लागि नभएको दाबी गरेका छन्। बजेट घोषणापछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले विगतकै संरचनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको आरोप लगाए।
‘संरचनागत परिवर्तनका लागि जुन गुणात्मकता बजेटमा आउनु पर्ने हो, त्यो देखिएन, पुरानै वितरणमुखी योजनालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ’ उनले भने। बजेटले ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यसको आधार बजेटले देखाउन नसकेको उनले बताए। मुलुकको निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई बजेटले उत्साह भर्न नसक्ने उनको आरोप छ।
सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति भने उनले सकारात्मक रहेको तर्क गरे। त्यस्तै स्वदेशबाट निर्यात गरिने बस्तुमा दिइएको सहुलियतका कुरा सकारात्मक रहेको उनले औंल्याए।
कुल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट घोषणा गरेको सरकारले ६२.४ प्रतिशत रकम चालुगततर्फ रहेको छ। २६. ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च तर्फ र ११ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनतर्फ बजेट छुट्याइएको छ।